Sesivele silazi usuku lokukhonjiswa kwesizini yesibili yeKhaya Ngaphambi Kobumnyama | Ngivela kwa-mac
Sesivele silazi usuku lokukhonjiswa kwesizini yesibili yeKhaya Ngaphambi Kobumnyama
Olunye lochungechunge lomndeni wonke esingaluthola ku-Apple TV + yiKhaya Ngaphambi Kobumnyama, uchungechunge lokho udlulile ngaphandle kobuhlungu noma udumo ngenkonzo yevidiyo yokusakaza ye-Apple yize ibithakazelisa impela (uma ungakayiniki ithuba okwamanje, uyayithatha).
I-Home Before Dark idrama yomndeni engaqondakali, isizini yayo yesibili, ngokusho komnqamulajuqu, ezoqala ukukhonjiswa ngaphambi nje kwehlobo, ikakhulukazi Ngomhlaka 11 Juni. Ngalolo suku, i-Apple izolenga isiqephu sokuqala sesizini yesibili futhi njalo ngoLwesihlanu izokwengeza esisha.
Okwamanje ayikho i-trailer esemthethweni yale sizini yesibili, okusazodingeka ukuthi siyilinde amasonto ambalwa, kepha uma nje isitholakala kusuka ngivela kwa-Mac sizokunikeza yona.
Le sizini yesibili izolandela intatheli uHilde Lasso (odlalwa yiBrooklyn Price) njengo uphenya ukuqhuma okukhulu okwenzekile epulazini lendawo. Ngesikhathi sokuphenya kwakhe, uLasso uzobhekana nenhlangano enamandla. Lokhu kubeka engcupheni yomndeni wakhe kanye nedolobha elincane ahlala kulo, i-Erie Harbour.
Isizini yokuqala yalolu chungechunge, nayo edlalwa ngumlingisi ofanayo, isibonisa ukuthi wonke umndeni uya kanjani edolobheni likababa womndeni lapho intatheli encane ifinyelela khona phenya icala elidala lokubulala ukuthi bonke abantu bafuna ukungcwaba futhi bakhohlwe ingunaphakade.
Ngokungafani nesizini yokuqala, okuyi ikhonjiswe ngokugcwele ngo-Ephreli 2020 (ngenxa yalolu bhubhane), kule sizini yesibili i-Apple izokwamukela ukukhonjiswa kwesonto
UJim Sturgess (Kuwo Wonke Umhlaba) ubuya njengobaba kaLasso. Isizini yesibili izophinde ifake uKylie Rogers (Yellowstone), Joelle Carter (Justified), Aziza Scott (The Fosters) no-Abby Miller (The Sinner), nabanye.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » Sesivele silazi usuku lokukhonjiswa kwesizini yesibili yeKhaya Ngaphambi Kobumnyama
Ishicilele isifundo esisha senhliziyo esenziwe ezigulini ezine-Apple Watch
IHilde Lisko Chronicles ibuyela ku-Apple TV + ngoJuni 11